सकारात्मक भावका गीत गाउन मन पराउँछु » Enavanari
सकारात्मक भावका गीत गाउन मन पराउँछु
गायनमा रुचि कसरी बढ्यो ?
सानो छदा हजुरबुवाले बिहान बेलुका आरती गाउनु हुन्थ्यो, मेरो वुवाले रफी, लता, किशोर कुमार, माइकल ज्याक्सन तथा अन्यका इङ्लिस क्यासेट ल्याएर बजाउनु हुन्थ्यो, त्यस्तै मेरो माइला काकाले मलाई बालगीतहरु गाउन लगाउनु हुन्थ्यो । सायद यहि वातावरणले मलाई नजानिदो तरिकाले संगीत, लय सँग आवद्ध गरे जस्तो लाग्छ ।
गायन क्षेत्रमा प्रवेश ?
इङ्लिस स्पाइस गल्र्स, भारतमा भिवा ब्यान्डको लोकप्रियता बढिरहेका बेला त्यसबाट प्रभावित भई हामीले बुटवलमा पल्स फिमेल ब्याण्ड खोल्यौं । त्यसैबाट मेरो गायन यात्राको सुरुवात भयो ।
कस्तो गीत गाउन रुचि राख्नु हुन्छ ?
अर्थपूर्ण, खुशी र सकारात्मक भावका गीतहरु गाउन मन पराउँछु ।
आगामी दिनमा के कस्ता गीतहरु आउने क्रममा रहेका छन् ?
श्रोतालाई मोटिभेट गर्ने तथा आफ्नै कोम्पोजिसनमा गाउने कोशिशमा छु ।
संगीत बाहेक अन्य रुचिका विषयहरु ?
शिक्षण मेरो पेशा मात्र नभएर रुचि पनि हो ।
वर्तमान परिपे्रक्षमा नेपालमा गायनलाई पेशा बनाउन सकिने अवस्था छ त ?
प्रविधिले यो क्षेत्रलाई ब्यापक बनाएको छ, घर घर मा रेकर्डिङ स्टुडियो बन्न सक्ने अवस्था छ, युट्ुव लगायत सामाजिक संजालहरु खुलेका छन् । आँफूलाई प्रस्तुत गर्ने थुप्रै प्लेटफर्म, मिडियाहरु पाइएको छ, त्यसैले संगीतलाई मज्जा सँग पेशा बनाउन सकिन्छ ।
नेपाली संगीतको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
मैले देखेको अवस्था, भाइरल कसरी हुने ? अर्थात फास्ट फुड जस्तो, अर्थपूर्ण गीत आएको थोरै मात्रमा तर पुरानो नै शैलीमा नविनतम केही नभएको जसमा नयाँ र पुरानोको समन्वय राम्ररी हुन नसकेको जस्तो लाग्छ साथै स्थानीय भाषालाई प्रयोग गर्दै लोक शैलीमा चर्चित बनाइने परिपाटी बसेको छ ।
एउटा गीत चर्चित हुनुमा गायक÷गायिकाको भूमिका कति हुन्छ ?
एउटा गीत चर्चित हुन गीत पछाडीको सोच महत्वपूर्ण हुन्छ, भन्नाले कुन भावमा गीत तयार गर्न खोजिएको हो, त्यसपछि बल्ल संगीतमा सरिक हुने गायक, शब्द, संगीत अनि अरेन्जमेन्ट तथा प्राविधिक पक्षको भूमिका आउँछ ।